मासुभन्दा महंगो प्याज खेती कसरी गर्ने ? यस्तो छ तरिका – Kalika News
मासुभन्दा महंगो प्याज खेती कसरी गर्ने ? यस्तो छ तरिका
१४ मंसिर २०७६, शनिबार १२:२१ , मा प्रकाशीत
मंसिर १४-प्याज तरकारी/सब्जी आदिमा हालिने मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने मसला फल जो माटामनि फल्छ। प्रायः सबै ठाउँमा यो मसलाको उत्पादन हुन्छ । नेपालका पचहत्तरै जिल्लामा प्याज खेती हुने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा २० हजार ८० हेक्टर जमिनमा प्याज उत्पादन भयो। देशभरको प्याज क्षेत्रफलको एक चौथाइ हिस्सा सप्तरी जिल्लाले ओगटेको छ। आव २०६७/६८ मा उत्पादित कुल दुईलाख ६३ हजार ५३६ टनमध्ये ७७ हजार ६४८ टन सप्तरीमा उत्पादन भएको थियो।
प्याज उत्पादनमा सप्तरीपछिका जिल्लामा क्रमशः बारा, सिरहा र रूपन्देही छन्। हिमालपारिका मुस्ताङ र मनाङमा पनि वार्षिक १६ टन प्याज फल्ने गरेको छ। प्याज नेपालको तरकारी बालीमा काउली र बन्दापछि तेस्रोमा पर्छ। प्याज जति उत्पादन भए पनि आसपासका बजारमा सजिलै खपत भइरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा बढ्दो माग धान्न आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायकै रूपमा प्याज उत्पादन गरे बजारको खाँचो नपर्ने भन्ने देखाउँछ। राजधानी काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा ९५ प्रतिशत प्याज भारतबाट आइरहेको छ। भारतमा प्याज महँगो वा आयातमा अवरोध हुँदा चीनबाट पनि ल्याइन्छ।
प्याज खेती गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषयहरु ?
प्याज खेती गर्दा यसलाई अपनाउनु पर्ने विधिहरु राम्ररी अपनाएको खण्डमा २०००/३००० के.जी. प्रति रोपनी उत्पादन हुन्छ । खुद नाफाको हिसावले हेर्ने हो भने वेमौसममा सेट प्रयोग गरी लगाइएको हरियो साग उत्पादन वाट दोब्बर वढी फाइदा लिन सकिन्छ ।
प्याज भण्डारणमा छिट्टै उम्रने/टुसाउने कारण के हो र यसबाट बच्न के उपाए गर्न सकिन्छ ?
जलाई सुख्खा, चिसो तथा हावा संचार हुने किसिमको भण्डार घर चाहिन्छ । स्थानीय स्तरमा भने खरको छानो भएको हावा राम्रो संचालन हुने जुटको वोराले छोपिएको भण्डारण संरचनामा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
प्याज सुकाउने भन्नाले के बुझिन्छ ? यो विधि कसरी अपनाईन्छ ?
प्याज खेतीमा मलखाद व्यवस्थापनको लागि १०००–१५०० के.जी.गोवरमल, १०–१२ के.जी. नाइट्रोजन, ७–८ के.जी.फस्फोरस तथा ३–४ के.जी. पोटासियम प्रति रोपनी आवश्यक पर्दछ । यस वाहेक विरुवा वर्धक रसायनहरु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
व्याक्टेरियल नरम सडन कुन अवस्थामा लाग्दछ र यसका व्यवस्थापन विधिहरु के के छन् ?
प्याजमा लाग्ने डाउनी मिल्डयु रोग कस्तो वातावरणमा वढी फैलन्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन ?
प्याजको वैजनी धब्वा रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ र यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
पटक पटक सिचाई गर्नु पर्ने हुँदा प्याजवालीमा वढीनै झारपात पलाउँदछ । अतः वाली अवधि भरमा ४-५ पटक झारपात उखेल्नु पर्दछ । झारनाशक विषादी वसालिनको पनि प्याज खेतीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नीम, गहुँत, असुरो वा गन्ध आउने वस्तु प्रयोग गरी घरायसी वा प्रशोधन विधि द्धारा वनाईएको वाली वा पशुहरुमा यिनका शत्रु विरुद्धमा प्रयोग गरिने पदार्थलाई जैविक विषादी भनिन्छ । यसका अवशेषहरु लामो अवधिसम्म नरहने हुँदा मानव स्वास्थ्यको हिसावले लाभदायक हुन्छन् ।
प्याज खेती गर्दा खाद्यतत्वको ज्यादै महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । जग्गा तयारीको वेलामा लगाएको मलखाद वाहेक विरुवा राम्ररी सरेपछि पहिलो पटक ३०–४० दिन भित्र मल्टिप्लेक्स वा २ एम एल एग्रोमिन प्रतिलिटर पानीमा मिसाई १५–१५ दिनको फरकमा ४ पटक छर्नु पर्दछ । प्याजमा विशेष गरी जिंक र कपरको कमी हुने हुनाले यी तत्वहरु आधा के।जी। जिंक तथा १ के.जी. कपर प्रति रोपनीका दरले हाल्न सिफारिस गरिन्छ ।
वेमौसमी प्याज खेती गर्न सेट उत्पादन गर्दा पनि प्याजको हिँउदे नर्सरी राखेजस्तै राख्ने हो तर वीउ भने निकै पातलो छर्नुपर्दछ तथा मलखादको मात्रा पनि वढाउनु पर्दछ । २-३ ग्रामको सेट रोप्ने हो भने ६०-७५ के.जी. प्याजको सेट प्रति रोपनी क्षेत्रफलको लागि आवश्यक हुन्छ।
यसको खेती कति प्रकारले गर्न सकिन्छ रु कुन तरिकाले खेती गर्दा वढी उत्पादन लिन सकिन्छ?
प्याज खेती गर्दा गानो वाली भएको कारणले अन्य तरकारी वालीमा भन्दा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ।राम्रो सँग खन् जोत गरी २५–३० से.मि.सम्म माटो मिहिन पारी आवश्यक मात्रामा मलखाद राख्नुपर्दछ ।
प्याजका वेर्ना आफै तयार गर्न १ मिटर चौडाई, ३ मिटर लम्वाई, १०–१५ से-मि- उचाई भएको व्याडमा ५–७ से.मि. को फरकमा कुलेसो वनाई वीउ खसाल्नु पर्दछ त्यसपछि छापो हाल्ने र वीउ उम्रेपछि सो छापो हटाउनु पर्दछ ।